Nkenke biography Miguel Delibes | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto - Wikimedia / Rastrojo
Miguel Delibes ebe obibi bụ onye Spain a ma ama na-ede akwụkwọ nke a mụrụ na 1920 na Castilian obodo Valladolid. N'ịbụ onye a zụrụ azụ ma jiri ọrụ abụọ dị n'azụ ya dị ka Iwu na Azụmaahịa, Delibes nwere ọkwá dị mkpa na akwụkwọ akụkọ ahụ, bụrụ onye nduzi nke akwụkwọ akụkọ El Norte de Castilla ebe ọ malitere ibipụta.
Delibes bụ nwoke nke mmadụ niile maara ihe omume ntụrụndụ ya nke anyị na-ahụ ịchụ nta na football. Thechụ nta ahụ pụtara n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ya, na-akọwapụta nnukwu ọrụ "Ndị Senti Na-enweghị Mmebi", bụ nke e mechara wezuga ụlọ sinima na nnukwu arụmọrụ Paco Rabal na ọrụ Azarías na bọọlụ bụ isiokwu isiokwu dị iche iche onye edemede nyere akwukwo akwukwo banyere mmetuta na egwuregwu mara mma rapuru ya.
Ihe ndi iche bu ihe ndi mmadu bu ndi Delibes, onye ahuru onye otu Royal Academy na 1973 onye natara otutu onyinye, gunyere National Literature Award, Critics Award, National Literature Award, the Onyeisi Asturias ma ọ bụ Cervantes.
N'ikpeazụ, mgbe ọ dị afọ 89 Delibes nwụrụ na 2010 na Valladolid, obodo hụworo ya ka a mụrụ ya.
1 Akwụkwọ Miguel Delibes
2 Onu ahia
3 Mmegharị nke akwụkwọ Delibes maka ihe nkiri na telivishọn
4 Ọchịchọ nke Miguel Delibes
Akwụkwọ Miguel Delibes
Miguel Delibes bụ ezigbo mmadụ mgbe ọ na-ede ede. Onye edemede a kacha mara amara bụ akwụkwọ ọgụgụ, nke mbụ n’ime ha bụ akwụkwọ ọgụgụ "The onyinyo nke cypress na elongated", nke natara onyinye. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọ bipụtara akwụkwọ akụkọ site na 1948, eziokwu bụ na O bipụtakwara ọtụtụ akụkọ, njem na akwụkwọ ịchụ nta, edemede, na edemede. Arefọdụ amaara nke ọma karịa ndị ọzọ, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile anaghị ahụ maka akwụkwọ akụkọ ha.
Otu n'ime njirimara Miguel Delibes pen n’enweghị mgbagha ọ bụ nka o nwere iji wuo odide. Ndị a siri ike ma nwekwaa ntụkwasị obi zuru oke, nke na - eme ka onye na - agụ ya nwee ọmịiko na ha site na mbido. Na mgbakwunye, ebe ọ bụ onye ode akwụkwọ na-eleru anya, ọ nwere ike ịmegharị ihe ọ hụburu site na ịkpụzi ya ka ọ masị ya na-enweghị efunahụ ihe mere o ji dee ọrụ ya.
N'ime akwụkwọ ndị ode akwụkwọ kachasị ama ama anyị nwere ike ịkọwapụta:
Onyinyo cypress bu ogologo (1948, Nadal Prize 1947)
Nwa m nwoke bụ Sisi (1953)
Diary nke dinta (1955, National Prize for Literature)
Mụaka (1962, Onyinye Ndị Nkọwa)
Onye a na-achị oche eze (1973)
Ndị aka ha dị ọcha (1981)
Nwanyị na-acha ọbara ọbara na isi awọ (1991)
Onye jụrụ okwukwe (1998, Nrite maka Akwụkwọ)
Na mgbakwunye, aha dị iche iche kwesiri ịbụ akwụkwọ A onye edemede akwụkwọ chọtara America (1956); Thechụ nta maka Spain (1972); Adventures, ndabara na misadventures nke dinta na ọdụ (1979); Castilla, ndị Castilian na ndị Castili (1979); Spain 1939-1950: Ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke akwụkwọ akụkọ (2004).
Kemgbe ọrụ ya dị ka onye edemede, Miguel Delibes anatala ọtụtụ onyinye na nyocha na ọrụ ya, nakwa maka ya. Nke mbụ ha nyere ya bụ n’afọ 1948 maka akwụkwọ edemede ya "The cypress ndò na elongated". Ọ bụ Nrite Nadal mere ka ọ bụrụ onye amara nke ọma na akwụkwọ ya dọtara uche.
Afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, na 1955, ọ meriri National Narrative Prize, ọ bụghị kpọmkwem maka akwụkwọ akụkọ, kama maka "Diary nke dinta", ụdị nke o jikwa ọtụtụ afọ nke ndụ ya.
Na 1957 Fastenrath Prize, metụtara Royal Spanish Academy, ọ natara maka akwụkwọ ya ọzọ, "Naps na ifufe ndịda."
Ihe nrite atọ a dị ezigbo mkpa na ọrụ ya. Agbanyeghị, ọ bụ rue afọ 25 ka nke ahụ gasịrị ka o jisiri ike nweta ihe nrite ọhụrụ, Onyeisi Asturias de las Letras, nke enyere Miguel Delibes na 1982.
Site ụbọchị ahụ, ndị enọ na recognitions soro soro ihe otu afọ. Ya mere, o nwetara Doctor honois causa na Mahadum Valladolid na 1983; na 1985 akpọrọ ya Knight nke Order of Arts and Letters na France; Ọ bụ Ọkpara a hụrụ n'anya na Valladolid na 1986 na Dọkịta na-asọpụrụ causa site na Complutense University of Madrid (na 1987), nke Mahadum Sarre (na 1990), nke Mahadum Alcalá de Henares (na 1996), na Mahadum nke Salamanca (na 2008); yana nwa nwoke Molledo, na Cantabria, na 2009.
Banyere onyinye, ụfọdụ dị ịrịba ama, dị ka City of Barcelona Award (maka akwụkwọ ya, Wood of a Hero); Nrite Mba Maka Akwụkwọ Ozi Spanish (1991); onyinye Miguel de Cervantes (1993); Nrite Nkọwa Mba maka El hereje (1999; ma ọ bụ Vocento Nrite maka Humankpụrụ Mmadụ (2006).
Mmegharị nke akwụkwọ Delibes maka ihe nkiri na telivishọn
N'ihi ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ Miguel Delibes, ọtụtụ malitere ile ha anya iji hazie ha na fim na telivishọn.
Mgbanwe mbụ nke otu n’ime ọrụ ya bụ maka sinima, ya na akwụkwọ akụkọ El camino (edere na 1950) ma gbanwee ya na fim na 1963. Ọ bụ naanị ọrụ a rụgharịrị, afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, na 1978, banye n'usoro onyonyo nke nwere isi ise.
Malite na 1976, Ọrụ Delibes ghọrọ ihe ngosi maka mmegharị ihe nkiri, inwe ike ịhụ akwụkwọ na ezigbo oyiyi My arụsị nwa Sisi, nke akpọrọ aha na fim ahụ Ihe osise ezinụlọ; Onye isi ocheeze, na agha papa m; ma ọ bụ otu n'ime ya nnukwu wɔfrɛ wɔn T Ndị dị ọcha dị ọcha, nke Alfredo Landa n'onwe ya na Francisco Rabal meriri onyinye maka ịrụ ọrụ nke ọma na nwoke na Cannes.
Nke ikpeazụ n'ime ọrụ ndị a gbanwere agbanwe bụ Akwụkwọ nke onye lara ezumike nká na ihe nkiri Di na Nwunye zuru oke (1997) na Antonio Resines, Mabel Lozano ...
Ọchịchọ nke Miguel Delibes
Mbinye aka nke Miguel Delibes // Image - Wikimedia / Miguel Delibes Foundation
Otu n'ime mmasi nke Miguel Delibes ị nwere ike ịga leta ma ọ bụrụ na ị gafee Valladolid bụ na, n'otu ụlọ ebe a mụrụ ya, n'okporo ámá Recoletos, nke ka dị, enwere ihe edere nke nwere ahịrịokwu sitere n'aka onye edemede ahụ na-asị: "M dị ka osisi na-eto eto ebe a kụrụ ya", nke a sụgharịrị na ọ dịghị mkpa ebe ọ nọ n'ụwa, ọ jisiri ike imeghari ma nwee ọfụma na nka ya.
Ọrụ nkà ya malitere ịme ihe nkiri, anaghị ede. Ihe osise izizi sitere na akwụkwọ akụkọ "El Norte de Castilla", ọrụ ọ nwetara site n'ịgụ akwụkwọ na oflọ Akwụkwọ nke Arts na Crafts. Agbanyeghị, n’oge ahụ akwụkwọ akụkọ ahụ pere mpe nke ukwuu ma ejiri aka niile rụọ ọrụ ndị ọzọ. Ya mere, obere oge mgbe o gosipụtara ụdị edemede o nwere ma bido dee ya. Ruo n'ókè nke na, mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọ bụ onye nduzi nke akwụkwọ akụkọ ahụ, ọ bụ ezie na ọ ghaghị ịgba arụkwaghịm na oge Franco n'ihi nrụgide a na-enye ya.
N'ezie, ọ bụ ezie na ọ hapụrụ akwụkwọ akụkọ maka ọrụ ya dị ka onye edemede, ozugbo oge Franco gafere, akwụkwọ akụkọ "El País" nyere ya ka ọ bụrụ onye nduzi ha nwara ya ọbụna otu n'ime omume ọjọọ ya kachasị njọ: ebe ịchụ nta nzuzo dị nso na Madrid. Delibes jụrụ ya n'ihi na ọ chọghị ịhapụ Valladolid ya.
Ihe dị ịtụnanya bụ ụzọ ọ si malite ide akwụkwọ. Ọtụtụ ndị maara na ezigbo aha ya bụ nwunye ya, Ángeles de Castro. Ihe ikekwe enweghi njikọ dị ukwuu bụ na, afọ mbụ nke onye edemede, o nwere nkezi nke otu akwụkwọ otu afọ. Ma nwee kwa nwa n'afọ.
Otu nkebi ahịrịokwu kachasị mkpa nke onye edemede bụ, enweghị obi abụọ: "Ndị na-enweghị akwụkwọ bụ ndị ogbi."
Miguel Delibes lụrụ nwunye ya na 1946. Ma, ọ nwụrụ na 1974, na-ahapụ onye edemede ahụ ịdaba na nnukwu ịda mbà n'obi nke mere ka akwụkwọ ya nwee ohere karịa oge. A na-ewere ndị Delibes ka a melancholic, mwute, nwoke iwe ... na akụkụ nke ọchị ahụ bụ n'ihi enweghị nnukwu ịhụnanya na ihe ngosi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Biography nke Miguel Delibes
Ọ dị mma nke ukwuu, enwetara m 10 ekele bio, susuo s
Zaghachi Nashi :)
Daalụ maka ileta anyị! Echere m na ị kopụtaghị ya n'ụzọ nkịtị ... n'ụzọ ahụ ị ga-amụta obere! hehehe Ekele!
A na-egosipụta otu site na ilele isiokwu ndị a.
Ndo, ị zipughi akwụkwọ maka na Miguel Delibes nwụrụ. Ọ bụrụ na ị chọghị, ị ga-etinye ya? Achọrọ m ịma ngwa ngwa